I-991-1000 yoluhlu lwe-2932
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eMyanza
Umhlaba omkhulu uyathengiswa eMyanza Mubende ebukhulu obuzii-7 iihektare ezingama-49M nge-7M ngeekhilomitha ezili-12 ukusuka kumbane wedolophu yaseMityana kuphela izibonda ezi-2 ukuya kumanzi wamanzi ngeemitha ezingama-600 ezilungileyo ukulima, isikolo, umzi-mveliso, ikhaya lasekhaya kunye nokunye okuninzi .
Mubende in Central Region (Uganda)
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eNamasumbi
Umhlaba ofanelekileyo uyathengiswa eNamasumbi ebukhulu obu-1 kwi-26M ilungile kwezolimo kunye nendawo yokuhlala enesihloko esabucala somhlaba.
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eBusukuma
Iihektare ezingama-20 Umhlaba othengiswayo Indawo: IBusukuma 800 yeemitha ukususwa kwendawo ye-tarmac: 20 iihektareIxabiso lokuthenga: 1,600,000,000Ingxelo: Isihloko esiyimfihlo sabucala Esi sikwindawo ekuhlalwa kuyo ekhuselekileyo ngokufikelela lula kwendlela. Umhlaba awunazo izinto ezibandakanyekayo.Ikwindawo ephuhlisiweyo yommelwane kwaye une-Wondrefu ...
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eJoggo
Umhlaba ofanelekileyo unokuthengiswa eJogo wobungakanani bommandla we-2.5acres kwi-360M efanelekileyo nayiphi na into.
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eZirobwe
An agricultural land for sale in Zirobwe of size 4 acre with a coffee plantation at 6.M per acre having a ready land title.
Luwero in Zirobwe (Uganda)
Isiza sithengiswa eZirobwe ngotywala ikofu ekwi-2 iihektare ezingama-26M kunye nesihloko somhlaba sangasese somhlaba.
Agricultural Land For Sale In Kikyuusa
Luwero in Kikyuusa (Uganda)
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eMatugga
I-5acres iyathengiswa kwi-mattuga sindo ngexabiso elinokuxoxwa le-50M nge-acre elungileyo kuyo nayiphi na into kuyo.
Umhlaba wezoLimo uyathengiswa eMadudu
I-1920 iihektare ziyathengiswa eMadudu Mubende nge-4M nge-100 yeekhilomitha ukusuka eKampala ukuya kwindawo enomdla kakhulu echukumisa umlambo uNabakazi ngesihloko senkululeko.